Kusvirwa nehuni, Chitofu Chemahara, Isa Chitofu - Womho
Kandira Iron Pumps
Choto Uye Choto
Kanda teapot yesimbi
Kanda simbi pombi
kukanda simbi enamel skillet
kukanda simbi yepepuru yakafukidzwa nefry pani
kukanda simbi pizza mapani akafanogadzirwa nehuni nhovo
Kanda Iron Yakasanganiswa Sauce Pan
kukanda simbi kutenderera enamel skillet
kukanda simbi kutenderera bhuruu enameled skillet
kukanda simbi tsvuku enameled skillet 28cm
Hebei Womho Imp. & Exp. Kambani yekutengesa, iri muShijiazhuang, China.We tinonyanya kugadzira uye kutumira kunze simbi huni dzinopisa zvitofu, masitovu esimbi, cast iron ironware, BBQ, pombi dzesimbi nezvimwe.
Tinogona kupa OEM sevhisi, isu tinochengeta zvakavanzika zvevatengi dhizaini uye yekutengesa chakavanzika zvakanyanya (Hatitengesi zvigadzirwa kumushandisi zvakananga.)
Tine ruzivo rwekukura uye ruzivo rwekushandira.Offryry yedu yakavambwa muna 2001, yakatanga kuburitsa chimiro cheEngland chakakanda simbi yemoto nezvimwewo panguva iyoyo, nekuda kwekudzora kwemhando yepamusoro, zvigadzirwa zvedu zvakanaka kutengesa, izvozvi, yedu foundry ine mafekitori maviri emabheki, vanopfuura vashandi zana.
Takatanga kuburitsa simbi yakachena yekupisa zvitofu kubvira 2009. Ese masitofu edu anosangana neEC: EN13240: 2001 + A2: 2004, zvitofu zvedu zvakaedzwa neEurope yakaziviswa muviri, uye mamwe emastofu edu akatenderwa DEFRA.
Yedu simbi simbi yekubika-ware ndeye mhando yepamusoro, inodhura-inoshanda.We vimbiso yekudzikama yemhando yepamusoro kugadzirwa kupihwa.
Kanda simbi teapot yakavezwa
Danda inzira yakasununguka yekugadzira kupisa mumba kana huni chaidzo dzichishandiswa muchoto chehuni. Miti yedu inogadzira okisijeni masikati kuburikidza nefotosynthesis uye carbon dioxide husiku ...
Runhare: 86 311 89278651